ခါးနာခြင်း - Hello Sayarwon
ခါးနာတာက အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ခံစားရတတ်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာပါ။ ခါးနာတာက ဆေးခန်းပြရလောက်အောင် မပြင်းထန်ပေမယ့် နေ့စဉ် အလုပ်ကိုတော့ အတော်လေး ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဘာကြောင့် ခါးနာနိုင်သလဲ။ ခါးနာလာရင် ဘယ်လိုတွေ ဂရုစိုက်ရမလဲဆိုတာကို ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်။
ခါးနာတဲ့အခါ ဘယ်လို ခံစားရနိုင်လဲ……….
အပေါ်က အချက်တွေအပြင် ဒီလိုရောဂါတွေကြောင့်လည်း ခါးနာနိုင်ပါတယ်။
ခါးနာရင် ဘယ်လို ခံစားရနိုင်လဲ…………
ခါးနာတာ သက်သာစေဖို့ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ……….
Ways to Relieve Back Pain https://www.webmd.com/pain-management/ss/slideshow-relieving-back-pain Accessed Date 25 Nov 2020
Home remedies for fast back pain relief https://www.medicalnewstoday.com/articles/322582 Accessed Date 25 Nov 2020
12 Ways to Improve Back Pain https://www.webmd.com/back-pain/features/12-back-pain-tips#1 Accessed Date 25 Nov 2020
Back pain https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/back-pain/symptoms-causes/syc-20369906 Accessed Date 25 Nov 2020
တရားထိုင်စဉ် နောက်ကျောနဲ့ ခါးနာခြင်းကို သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းများ